यी हुन तनाव कम गर्ने १० योगासन ! | सुदुरपश्चिम खबर
यी हुन तनाव कम गर्ने १० योगासन !
स्वामी आनन्द अरुणका अनुसार तनाव अहिलेको युगको सबैभन्दा जटिल मानसिक समस्या हो।
वैज्ञानिक विकासको सहयोगले जुन–जुन देशमा जीवनशैली जति–जति परिवर्तन भइरहेको छ, त्यति–त्यति नै त्यहाँका मानिस बढी तनावमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन्। हुन पनि व्यस्त जीवनशैली, व्यस्तताले भरिपूर्ण दौडधुप लगायतका कारणले तनावको मात्रा दैनिक बढीरहेको छ।
स्वामी अरुणकै अनुसार तनाव सधैं नकारात्मक भने हुँदैन । एक हदसम्मको तनावले सजगता, प्रेरणा र कार्यदक्षता दिन्छ । तर, त्यसले सीमा नाघ्नासाथ तनावले अनेक प्रकारका शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक समस्या खडा गरिदिन्छ।
हाम्रोजस्तो अविकसित देशमा पर्याप्त चुनौती र प्रतिस्पर्धा नहुनु, कार्यसम्पादनको गुणवत्ताको कुनै मापदण्ड नहुनु, निश्चित लक्ष्यसम्म पुग्न निश्चित समय सीमा निर्धारण नहुनुले पनि मानिस अल्छी, लोसे र अप्रत्युत्पादक भएको देखिएको छ।
डा. कपिल देव उपाध्ययका अनुसार मान्छेलाई रोगी बनाउने कारण मध्य मानसिक तनाव पनि एक हो। तनावका कारण रोग बढी लाग्ने र उच्च रक्तचाप, पेटको अल्सर र मुटुसम्बन्धि रोग, जस्तै हार्ट एट्याक हुने संभावना उच्च हुन्छ।
अहिले छिटो विभिन्न रोग लाग्नमा मानसिक तनाव एउटा प्रमुख कारण मानिन्छ। जति मानसिक तनाव वढ्यो त्यति चिन्ता बढ्ने र राम्रोसँग काममा ध्यान दिन नसकिने भइन्छ, अर्थात् मानसिक तनावले उत्पादनशिलता घटाउँछ। मानसिक तनावकै कारण रिस उठ्ने, मुड खराब हुने र झगडालु समेत बन्न सक्छ।
त्यसैले मानसिक तनाव ब्यबस्थापन जरुरी हुन्छ। मानसिक तनाव घटाउने तरिकामध्य दैनिक जीवनमा अपनाउन सकिने कुराहरुमा जोडदिनुपर्छ । जसले गर्दा बर्तमान परिस्थितिले सिर्जना गरेको तनावका कारण समेत दुर हुन सक्छन्।
यीनै कुरालाई ध्यान दिँदै हामीले यहाँ तनाव कम गर्ने १० योगासनका तस्बिरहरु प्रस्तुत गरेका छौं। नयाँ पुस्ता बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * +5= 9